Dr C/qaadir oo ka hadlay xanuunada Afka, baaqna u jeediyay bulshada Soomaaliyeed – Radio Muqdisho
Dr C/qaadir oo ka hadlay xanuunada Afka, baaqna u jeediyay bulshada Soomaaliyeed
Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa bulshada uga digay waxyaabo badan oo halis ku ah caafimaadkooda oo ay ka midka yihiin, siliga gabdhuhu ay afka ku xirtaan, dhayalsiga cadayga iyo qataraha waxyaabaha macmacaanka ah ay u keenayaan caafimaadka qofka beni’aadamka.
Dr Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, isla markaana marti ku ahaa barnaamijka weydii dhaqtarka oo ah barnaamij todobaadle ah, kana baxa Telefishinka iyo Idaacadda Qaranka ayaa sheekeeyay xanuunada ku dhaca Afka, gaar ahaan ciridka iyo ilkaha.
Dhaqtarka ayaa bulshada uga digay inaysan dhayalsan cadayga oo uu ku sheegay inay ku jirto caafimaadka qofka, loona baahanyahay in xilliyada uu qofka seexanayo iyo marka uu soo kacayaba in uu cadeysto.
“Hadii ay dhaqan geliyaan hal xadiith, dhib badan maba ku dhaceen qofka, teeda kale cudurada ku dhaca ciridka ay sabab u tahay caday la’aanta, marka anigu waxaan kula talin lahaa inay cadeyga badiyaan xilliyada uu qofka jiifanayo iyo marka uu hurdada ka soo tooso” ayuu yiri dhaqtarka.
Dr Cabdiqaadir ayaa hoosta ka xariiqay in dadka ay u xiranyihiin siliga ama biraha lagu toosiyo ilkaha aysan isticmaali karin daawooyinka xanuun baabi’iyaha, taasi oo uu ku macneeyay in shaqadii ilkaha laga hayay ay istaageyso.
“Muddada ay birahan u xiranyihin waxaa haboon in qofka uusan isticmaalin xanuunin baabi’iye nuucuu doonee ha ahaato, waayo Ilkaha way isriixayaan, oo waxaa la rabaa in laf lafkale ku dhexjirta in booska laga wareeyiyo si loo toosiyo ilkaha, laakiin haddii inta qofka ay ugu jirto biraha uu isticmaalo xanuu baabi’iye way joogsaneynaa shaqadii laga hayay ilkaha” ayuu dhaqtar C/qaadir hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay.
Tacadiyada haweenka loo geysto oo looga hadlay kulan lagu qabtay Caabudwaaq